Kungani kune-imeyili eningi ku-Inbox yakho ONGAYIFUNDI. | Martech Zone
Kungani kune-imeyili eningi ku-Inbox yakho ONGAYIFUNDI.
ISonto, May 13, 2007 NgoMgqibelo, Ephreli 16, 2016 Douglas Karr
Namuhla, i-eROI ikhiphe ucwaningo kuhlolo olwenziwe kubathengisi be-imeyili abangaphezu kwama-200. Ngokwami ​​ngicabanga ukuthi imiphumela iyadumaza - icishe yethuse. I-eROI ibuze abathengisi be-imeyili ukuthi yini abacabanga ukuthi ibaluleke kakhulu. Nayi imiphumela:
I-IMHO, Ngivumelana ngokuphelele nezinto ezi-2 eziphezulu. Ukubaluleka kanye nokulethwa kuyisihluthulelo… ukuthola umyalezo ofanele ku-ibhokisi lokungenayo kufanele kube yizici zakho ezibalulekile. Ukwakhiwa kwe-imeyili nokuqukethwe kuyinkinga yakho, ukulethwa kungathuthukiswa ngokusebenza nomhlinzeki wesevisi we-imeyili ophakeme.
I-3 engezansi ikhombisa ezinye izici ezimbi futhi ikhombe ezindabeni ezibalulekile ngabathengisi be-imeyili namuhla. Ukumaketha nge-imeyili kufanele kube 'ngumyalezo ofanele' kubantu 'abafanele' ngesikhathi esifanele '. Kuhle uma ubheka sonke isikhathi sakho kokuqukethwe, kepha ngabe ubhekisa lokho okuqukethwe kubantu abalungile ngokuhlukaniswa okulungile noma ngokukhiqiza ngamandla okuqukethwe ngaphakathi kwe-imeyili okususelwa kubafundi bakho? Ngabe uyayifaka leyo imeyili ebhokisini labo lokungenayo nini kuzoba nomthelela omkhulu?
Abathengisi be-imeyili abathuthukile babona ukuthi ukuthunyelwa kokuthengiselana noma okubangelwe yithuba elihle lokumaketha. Kunezizathu ezimbalwa zalokhu:
Obhalisile uqale ukuxhumana. (umuntu ofanele)
Obhalisile ulindele impendulo. Abagcini ngokuyilindela, bayayifuna! (isikhathi esifanele)
Umlayezo ubhekiswe kumcimbi othile noma ucezu lokuqukethwe. (umyalezo ofanele)
Inqobo nje uma izindlela eziyinhloko zokuxhumana kungukuphendula obhalisile, amathuba e-upsell angafakwa kulowo mlayezo ngaphandle kwesidingo sesixhumanisi sokuphuma (imilayezo yokwenziwayo ayifani nayo I-CAN-SPAM.
Umyalezo Ofanele, Isikhathi Esifanele, Umuntu Ofanele
Nasi isibonelo: Ngithenge irutha engenantambo. Ku-imeyili yokuqinisekisa, kufanele ngabe ngithola umyalezo oqinisekisa ukuthengiswa kwami, ofaka imininingwane yami yokuthenga FUTHI unginikeza Ukuthunyelwa kwamahhala uma ngingathanda ukufaka ikhadi elisha elingenantambo lekhompyutha yami ngenhloso yokubizela esenzweni okuphelelwa yisikhathi ezinsukwini eziyi-10 . Mhlawumbe kunesipho sokuyifaka kokuthunyelwa kwamanje uma ngiku-oda ngaphakathi kwehora!
Inkinga, kunjalo, imvamisa ukuthi uhlelo luchaza isenzo kunokuphikisana nalokho. Sinohlelo olududula abathengisi be-imeyili ngezinsuku ezibekiwe ukuze kukhishwe iphephandaba esikhundleni sezinsuku ezibekiwe zokufinyelela ivolumu ethile yokuvula, ukuchofoza nokuguqulwa. Ngakho-ke abathengisi be-imeyili benza lokho abatshelwa khona… bashaya okunye okuqukethwe okuzama ngobuqili ukukusebenzisa kulo lonke uhlu lwabo futhi bakhipha i-imeyili ngomhla wokugcina.
Imiphumela iba mibi kakhulu, njengoba siqhubeka nokugcwalisa ibhokisi lokungenayo, ababhalisile bayakhokha ukunakwa okuncane kukonke ukuthumela imiyalezo nge-imeyili. Ngingakhuthaza bonke Abathengisi be-imeyili ukuthi bafunde incwadi kaChris Baggott no-Ali Sales - Ukumaketha Nge-imeyili Izinombolo ukuze ufunde kabanzi.
Tags: imeyili Marketingukwenza ngezifiso i-imeyiliobhalisile nge-imeyiliisikhathi se-imeyilizokubhalisaimeyili eyabangelai-imeyili engafundiwe
Izifinyezo: Zimeleni i-DEAD ne-DITO?
I-Sys-Con: IWebhusayithi Ecasula Kakhulu, Njalo?
May 13, 2007 ku-11: 26 AM
I-Amazon ihle kakhulu kulo mqondo othi "Umlayezo Okulungile, Isikhathi Esifanele, Umuntu Ofanele". Basebenzisa izinto osuvele uzithengile ukukukhomba ngezikhangiso ze-imeyili ezihambisana nalokhu kuthengwa lapho kukhona ukuthengisa / iphromoshini.
Uma kushiwo lokho, uhlelo aluphelele. Ngisanda kuthenga i-air compressor, futhi kunokuba bangikhombe ngezinsiza, balokhu bezama ukungithengisela enye i-air compressor!
May 13, 2007 ku-2: 55 PM
Ngiyavuma uSlap, yize ukwakheka kwe-imeyili abakwenzayo kubi - izincomo zabo eziku-inthanethi zinhle impela. Ngiyayithanda indlela engingayithenga ngayo incwadi futhi beza nokuthi 'abanye abantu abafunda leyo ncwadi bayifundani'. Okuhlukile lapho ngithengela omunye umuntu isipho - lapho-ke ngithola izincomo ngaso leso sipho! Ngifisa sengathi bangahlunga izipho kuma-algorithms.